Burmese taste - Iora: မြန်ကောင်းသက်သာနဲ့ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာနှုတ်ဆက်ပွဲ
Posted by Iora at 4:05 AM
စံပယ်ချို May 8, 2012 at 5:14 AM
အရှက်မရှိ သရက်စေ့ သများ ဂျက်ကလာရောက်သုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်
Qt May 8, 2012 at 5:16 AM
တကယ် ပါ အမရာ
တံတွေးတွေ ဂလု ဂလု နဲ့ မောက်စ် ကိုင်းရင် ကျနေတာ
စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ၀မ်းနဲ့ဝမ်းသာ လို့ခေါင်းစဉ်တက်လာလို့
ကျူတီက ရိုးရာ ပွဲလုပ်တယ် ထင်နေတာ :D :D
စိတ်မဆိုးနဲ့နော် မမ အိုင်အိုရာ :D
Iora May 8, 2012 at 8:43 PM
စိတ်မဆိုးပါဘူးကျူတီကလည်း။ ဘာကိုဆုိုးရမှာလည်း။း))
Vista May 8, 2012 at 6:01 AM
Iora May 8, 2012 at 8:47 PM
တကယ်ဆုို ကြာဆံကြော်မပါတောင်ရတယ်။ ကုိုယ်ကကျွေးချင်လို့ ထဲ့တာလေ များတောင်နေသေးတယ်။ စားစရာအမယ်များတော့ တစ်ခုချင်းထဲ့လိုက်ရင်ပဲ ပန်းကန်ကတော်တော်မောက်နေပြီ။ ဒါကြောင့်ဟင်းတွေကျန်နေတာ။
KhinU Khine May 8, 2012 at 6:47 AM
Iora May 8, 2012 at 9:15 PM
You are welcome. Thanks for visiting and commenting too.
Eat them all as usual.yammy:P
Iora May 8, 2012 at 9:17 PM
I miss you. How are you doing? Are you back?
Thanks for nice words. :D
khin May 8, 2012 at 10:32 AM
Well..if I never see that kind of party preparation, I'll always afraid to do party with colorful friends, thanks...& whichdu use to get pink color in ur jelly.
Iora May 8, 2012 at 9:26 PM
Yeah..it is kind of like combination of our Burmese culture and the good taste that all people from various places can eat happily. So the dishes with mild taste are alwaysagood option. I got the pink color from the pink color tapioca pearl in my jelly. Thanks for joining.
မြတ်ကြည် May 8, 2012 at 10:40 AM
အဲဒီ dipping sauce မစားဖူးဘူး။ လက်ဖက်ကို ကြိုက်ကြလား မမ?
Iora May 8, 2012 at 9:39 PM
အဲဒီလို dipping sauce ကုိုကျောင်းတက်တုန်းက Lab ထဲမှာတစ်နေကုန်နေရတဲ့အခါတွေမှာအလှည့်ကျအဆာပြေတွေဝယ်လာကြပြီးစားကြတော့အမြဲပါနေတော့စားဖြစ် သွားတာ။ မဆလာနံ့ လေးနဲ့ ဆုိုတော့စားလို့ ဝင်တယ်လေဘိုစာတွေကြားမှာ။း) လက်ဖက်ကတော့တစ်အားကြိုက်ကြလို့ မြတ်ကြည်လေးရေ။ ၀ယ်ပေးပါဆုိုပြီးမှာလို့ ခဏခဏ၀ယ်ပေးရတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါအ၀ယ်မှားလို့ အစပ်တွေနဲ့ တုိုးလို့ မစားနုိုင်ကြတာလည်းကြုံရသေးတယ်။ တစ်ချို့ အထုတ်တွေက ချဉ်ငံစပ်ပဲရေးထားတာ။ ဘယ်လောက်စပ်တယ်။ မစပ်ဘူးမသိရဘူးလေ။ အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မ ရဲ့ thesis defense day တုန်းက မ တုို့ ဌာနက defense အပြီးမှာ partyလုပ်ပေးတယ်လေ။ အဲဒါ လက်ဖက်ကိုသူတို့ ဖာသာမြန်မာစားသောက်ဆုိုင်ကနေ အော်ဒါမှာပြီး ထဲ့ကြတယ်။ ရှန်ပိန်ဖေါက်ပြီးလက်ဖက်နဲ့ ရယ်တော့ရယ်ရသား။ အမေရိကန်ပရော်ဖက်ဆာတွေလည်းကြိုက်သလားမမေးနဲ့ ။ ကုိုယ့်ရုိုးရာအစာကိုကြိုက်တယ်ဆုိုတော့ကိုယ်ကလည်းပျော်တာပေါ့နော်။
Snow May May 8, 2012 at 11:08 AM
ကြာဇံကြော်နဲ့.. ကျောက်ကျောတော့ တကယ်စားချင်သွားတယ်.. ကျန်တာတွေလည်း အားလုံးကြိုက်တယ် :D
Iora May 8, 2012 at 9:40 PM
ကြိုက်တာသာသုံးဆောင်သွားပါနော်။ လေနဲ့ ကျွေးရတာတော့တကယ်အားနာပါတယ်။း)
Nyi Linn Thit May 8, 2012 at 2:32 PM
Wow... ကျနော်လည်း ပြင်သစ်သွားပြီး ပီအိပ်ခ်ျဒီ သွားတက်ချင် လာပြီ၊း)
တကယ့်ကို အမျိုးစုံသလို လူပေါင်းစုံ ကြိုက်မယ့် ဟင်းတွေပါပဲဗျာ၊ မြန်၊ ကောင်း၊ သက်သာဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လည်း လိုက်တယ်၊ ကန်စွန်းရွက်၊ လက်ဖက်သုပ်နဲ့တင် ကျနော့်အတွက် စားကောင်းနေပြီ၊ တကီလာက ဒီလောက်မပြင်းပါဘူး မအိုင်အိုရာရဲ့..၊း) ကြိုက်တယ်..။
Iora May 8, 2012 at 9:46 PM
အဟီး..သွားတက်လေ။ အွန်လိုင်းကနေ ပွဲလုပ်ပေးမယ်။း))
တကီလာကမပြင်းဘူးဆိုတော့ကိုညီလင်းသစ်က သဘာကြီးပါလားလို့ တွေးရမလိုဖြစ်သွားတယ်။ စတာပါ။
သူတို့ တွေတော့ ပြင်းလွန်းလို့ ဆုိုပြီးမီးရှုို့ ကြည့်ကြတာ မီးတောက်တယ်လေ။ Straight သောက်ပြီးတာနဲ့ ရှုံ့ မဲ့ပြီး အပြေးအလွှားအသားလုံးတွေဝါးစားကြတယ်။း)
ကျမတော့တကီးလာနဲ့ လုပ်တဲ့ မာဂရီတာစ်ကိုပိုကြိုက်တယ်။း)
I love all the dishes! I wish I'd be there eating them all, and definitely drinking the drinks!!!
I'm glad that you love all the dishes.
I wish you were here and taste everything we had too!
မြစ်ကျိုးအင်း May 9, 2012 at 10:49 AM
ဒီနေ့မှ ဘလော့ဂ်တွေ စာလိုက်ဖတ်ရင်း ညဉ့်နက်လာတော့ ဆာသလိုလို ဖြစ်လာတာ ကျိတ်မှိတ်ပြီး ဆက်ဖတ်နေတာ။ ခုတော့ မရတော့ဘူး။ ထစားရတော့မယ်။ နှိပ်စက်ချက်က အဲဒီလို။
Tequila သောက်နည်းတော့ ကြားဖူးတယ်။ တခါမှတော့ မစမ်းဖူးသေးဘူး။
သူငယ်ချင်းတွေက ဝေးတော့မယ်ဆိုမှ ကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ မတွေ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို နောင်တ ရသလိုလို ဖြစ်မိတယ်။ အဲဒီစိတ်ကိုက တကယ်ခင်မင်သူတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ စိတ်မျိုးပေါ့။
မီးမီးငယ် May 9, 2012 at 10:56 AM
အင်းအိမ်က တီကီလာပုလင်းပို့ လုိုက်မှထင်တယ်။ ဘော်ဒါတွေနဲ့ စမ်းသပ်လို့ ရအောင်။း)
ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်တယ်..တကယ်ခင်လို့ ဖြစ်ရတာနော်။ တစ်ချို့ နှုတ်ဆက်ပွဲတွေသွားပါတယ်။ ဘာမှမခံစားရတာလည်းရှိတယ်။ ကောင်းတဲ့နေရာသွားရင်အားကျတာကလွဲလို့ နောင်တတော့မရခဲ့ပါဘူး။
စာရွက်လေးနဲ့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေချရေးထားလိုက်တယ်လေ။ ဘယ်အချိန်ဘာလုပ်မယ်ဆုိုပြီး။ ကြိုတွေးထားတော့ဇယ်ဆက်သလို အချိန်မလေအောင်လုပ်သွားလို့ ရတယ်လေ။ မတွေးထားရင်တော့အစီအစဉ်မကျတဲ့အခါစိတ်ပင်ပန်းရတာပေါ့။း)
အများနဲ့ ဆိုတော့ ကျောက်ကျောလည်းကောင်းတာဘဲ။ ကျောက်ကျော်လည်းကောင်းတာဘဲ။ အပန်းမကြီးရင်အိုင်အိုရာတော့အမြဲလက်ဖက်သုပ်ကျွေးတယ်။ ဒါပေမဲ့သယ်ရေးခက်ရင်တော့မကောင်းဘူး။
Punchတုို့Margaritasတုို့wine တို့ တစ်ခါတစ်ခါပွဲရှိရင်သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုသောက်နေတုန်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ နောက်နေ့ ကျခေါင်းကိုက်လို့ ချင့်သောက်ရပါတယ်။း)
Candy May 9, 2012 at 10:11 PM
ညီမလည်း မမလက်ရာကို စားခွင့်ရချင်တယ် :D :D
ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးပဲ သရေကျသွားတယ် :D :P
mstint May 9, 2012 at 10:48 PM
စားဖွယ်စုံလင်နဲ့ စားခွင့်ကြုံချင်ပါသေးတယ် အိုင်အိုရာရေ (စကားခေါ်တာ :P)
အုန်းနို့ကျောက်ကျော စားချင်လိုက်တာ တစ်နေ့က မချစ်(ချစ်ကြည်အေး) ထိုးကျွေးတာ မဝသေးဘူးး)
အိုင်အိုရာရဲ့ သူငယ်ချင်းလေး PhD သွားတက်ရမှာဆိုတော့ Congratulation လို့ပြောလိုက်ပါနော်။
Iora May 10, 2012 at 12:24 AM
အွန်လိုင်းပေါ်ကချည့်စားနေရတာမနိတ်ဘူးနော်။း)း)
ဓါတ်ပုံတွေကသေချာမချိန်နိုင်လို့ အရမ်းဝါးနေလို့ တကယ်အားနာနေတာ။
ကျောက်ကျောတွေအစားကောင်းတာမနေ့ ညကတီဗီရှေ့ မှာငုတ်တုတ်ကြီးအိပ်ပျော်နေတာ။း)
san htun May 12, 2012 at 10:40 AM
အောင်ညလေး စားချင်လိုက်တာနော်...သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ ကြတာ ပျော်စရာကြီး..ခွဲရမယ်ဆိုတော့လည့် ဝမ်းနည်းစရာကြီး..လက်ဖက်ကို ဗီယက်နမ်နဲ့နီပေါတွေ ကြိုက်တယ်..ကျောက်ကျောကို အမေရိကန်တွေ ကြိုက်တယ်..Jerry နဲ့တူလို့ တဲ့...
Iora May 12, 2012 at 10:05 PM
၀မ်းနည်းလို့ ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ အဲဒီလို စာလုံးပေါင်းမှားနေရင်အမှန်သိနေတဲ့သူကဖတ်ရတာ ကသိကအောက်ဖြစ်တတ်တာနားလည်ပါတယ်ရှင်။ ကျမလည်းပြန်စစ်မယ်ဆုိုပြီးတေးထားခဲ့ပေမဲ့မစစ်နုိုင်ခဲ့လို့ ပါ။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရတာတောင်းပန်ပါတယ်။
စားချင်ရင်စားလိုက်ကွာ။ ခုထိကုိုမကုန်သေးဘူး။ ဘယ်ကုန်မလဲ အဲဒီကျန်တဲ့ကြက်သားဟင်းကိုမစားဘဲ ကြက်ဥကြော်စားလုိုက် ငပိချက်ချက်စားလိုက်လုပ်နေတယ်လေ။ ဒီနေ့ ကံဆုိုးတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ သူ့ အမေလာလည်လို့ အတင်းကျွေးလွှတ်လိုက်သေးတယ်လေ။ ကိုယ်ကတော့သူငယ်ချင်းယူလာတဲ့ ရှမ်းထမင်းချဉ်ကိုစားတယ်လေ။
ဟုတ်တယ်။ ဗီယက်နမ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က စားဘူးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာလာမေးသေးတယ်။
လက်ဖက်ကို လက်ဖက်ခြောက်ကနေလုပ်လို့ ရမလားတဲ့။ ရတော့ရတယ် အရမ်းတော့မကောင်းဘူး။ နဲနဲတော့တူတယ်လို့ ပြောပြပြီးသူကလည်းဝယ်ခိုင်းလို့ ဝယ်ပေးရသေးတယ်။ ၀ယ်ပေးတယ်သာပြောတာတော်တော်များများတော့ဝယ်ခုိုင်းရင်ကိုယ်ကလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလုိုက်တာပါဘဲ။ မြန်မာအကျင့်အတုိုင်း။ သူတို့ ကြိုက်တယ်ဆုိုတော့လည်းကိုယ်ကပေးချင်တယ်လေ။း)
Iora May 12, 2012 at 10:12 PM
ဆောရီး ဆောရီး အမည်မဖေါ်သူရေ..
အမည်မဖေါ်သူလို့ ရေးတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိ အမည်ဖေါ်သူဖြစ်သွားလို့ ..
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) May 19, 2012 at 1:45 AM
ဒါပေမဲ့ ခွဲခွာနှုတ်ဆက်တဲ့ပွဲဆိုတော့လည်း စိတ်မကောင်းစရာ...
သာကူကျောက်ကျောနဲ့ အုန်နို့ကျောက်ကျောလေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေ
စကားမစပ်.. ပုလင်းတွေလည်း ကြိုက်တယ်။း)
Mar Mar Lwin May 28, 2012 at 4:22 PM
Iora May 30, 2012 at 3:57 AM